Nguva dzemakereke - Efeso, Nguva yekereke yekutanga, 33AD - 170 AD
churchages.net » Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Nguva dzemakereke - Efeso, Nguva yekereke yekutanga, 33AD - 170 AD
Nguva dzemakereke - Efeso, Nguva yekereke yekutanga, 33AD - 170 AD
Kereke yekutanga yakaberekwa nesimba raMwari, pasina munhu akasimudzirwa pakati pevatendi vaive muimba yepamusoro naMwari. Mweya Mutsvene wakaburuka uchipinda mune umwe neumwe wevanhu vaivemo imba yese ikazadzwa nendimi dzemoto unoshamisa dzikaonekwa pamisoro yavo. Saka kereke yeTestamente Itsva yakaberekerwa mumba.
MABASA 2:1 Zvino zuva rePentekosta rakati rasvika, vakanga vakavungana vose nomoyo mumwe panzvimbo imwe.
2 Pakarepo kutinhira sokwemhepo inovhuvhuta nesimba kwakabva kudenga, kukazadza imba yose mavakanga vagere.
3 Vakavona vo ndimi dzichiparadzana, dzinenge dzomoto; ndokumhara pamusoro womumwe nomumwe wavo.
4 Vose vakazadzwa noMweya Mutsvene, vakatanga kutaura nedzimwe ndimi, pavakapiwa napo noMweya kureva.
Chigadziko chemwenje minomwe chinomiririra nguva nomwe dzemakereke dzichararama mumakore 2000 enhorondo yevanhu. Nguva yekereke yekutanga yeEfeso yakatangwa musi wePentekosita apo Mwari akatungidza mwenje wepakati. Kereke yekutanga iyi ndiyo yaive kereke pakunaka kwayo kwese. Ndiyo yega muenzaniso wakanaka wezvinofanira kuita kereke yechokwadi, uye zvaitendwa muTestamente Itsva ndizvo zvinofanira kuva pakati-kati pendangariro dzedu semaKristu. Chero chinhu chakasiyana nechitendero cheTestamente Itsva zvinenge zvakureva kuti tiri kutsaukira kurudyi kana kuruboshwe tichibva panzvimbo pakanaka chaipo. Kutsauka kubva panzvimbo yeMagwaro hachisi chinhu chakanaka. Mavara mana ekutanga pazwi rinoreva kuti kutsauka muchirungu (deviate) anowanikwawo pamavara mana ekutanga pazita raDiaborosi (Devil). Satani ndiye muvambi wekufamba kwemunhu achitsauka nechero nzira kubva paShoko rakanyorwa.
Let us follow the example of that superb child king Josiah. Ngatitarisei muenzaniso wamambo aive mwana muduku Josia.
II MAKORONIKE 34:1 Josia akatanga kubata ushe ava namakore masere; akabata ushe paJerusaremu makore makumi matatu nerimwe.
2 Akaita zvakarurama pamberi paJehovha, akafamba nenzira yababa vake Davidii, haana kutsaukira kurudyi kana kuruboshwe.
Zvakaitwa naMwari kukereke yekutanga pazuva rePentekosta, akazviitawo paakazodza Tembere yaSoromoni nenzira imwechete nemoto unoshamisa wakaparadza zvipiriso.
II MAKORONIKE 7:1 Zvino Soromoni akati apedza kunyengetera, moto ndokuburuka kudenga, ukapedza chipiriso chinopiswa nezvimwe zvibayiro; kubwinya kwaJehovha kukazadza imba.
2 Vapirisiti vakakoniwa kupinda muimba yaJehovha, nokuti kubwinya kwaJehovha kwakanga kwazadza imba yaJehovha.
Asi maJuda aive nechiprista chaAroni chemunhu akasimudzirwa anotungamira ari pamusoro pesangano. Vanhu vaikwanisa chete kunamata Mwari kana vaine chiprista pakati pavo naMwari. Nekufamba kwenguva chiprista chakasimudzirwa ichi chaive chimire pakati pevanhu naMwari chakakundikana zvinosuwisa. Chero chinhu chinoitwa nemunhu chinokundikana. Mwari akazobvarura chidzitiro cheTembere pakarovererwa Jesu kuratidza kuguma kwekunamata muTembere uye vaprista vayo vaive vakundikana muna AD 33. Asi maprista aizvikudza aya vakaramba vachishingirira kuita zvezvegumi uye kuva nesimba pamusoro pevanhu, chaive chinhu chavaifarira kwazvo muhupenyu. Vakaramba vachitonga maJuda, vakabudirira kuvanyengera pavairamba vachinamata nenzira yaive isisina chokwadi, kusvikira Mwari aparadza Temberi muna AD 70, zvese nevaprista vayo vaizvitsvaga ivo vakaramba vachichengetedza kuipa kwehutungamiri hwechitendero chavo chaive chisisina maturo chichienda munzira yakaipa apo Mwari aive asuduruka kare.
Kereke yeTestamente Itsva yaizova yakasiyana.
Kwaizova kusina vanhu vaitungamirira pakati pevanhu naMwari.
Mwari akabva agadza vanhu vose vaitenda muna Kristu kuti vave vaprista pavaitakura Evangeri kuenda naro kunyika izere zvivi, richiparidzwa munzvimbo dzese kumativi ose, asi vachitarisa kumashure munguva kuvavambi venzira yavo mapostora. Paitendevuka vatadzi, vaibva vaitawo chikamu chevaprista. Saka hakuna muKristu akazobvira amira pakati paMwari neumwe muKristu. “Tarirai kudanana kunoita maKristu aya” ndiko kwaive kuyemura kwevasingatendi. MuKristu anokwanisa kumira pakati paMwari nevaya vasati vaponeswa, achivaratidza Muponesi. Asi panotendevuka mutadzi, anenge afanana nevamwe maKristu ose senhengo dzevuprista hwamambo.
I PETRO 2:9 Asi imi muri rudzi rwakasanangurwa, vuPirisita bwamambo, rudzi rutsvene
Hukama kunobva pakuenzana. Tese tinokwanisa kudzidza mumwe kubva kune mumwe. Hakuna munhu ari nani kudarika mumwe.
I PETRO 2:17 Kudzai vanhu vose. Idai hama dzose. Ityai Mwari. Kudzai mambo.
I PETRO 5:5 Saizvozvo imi vaduku, muzviise pasi pavakuru, nemi mose pfekai kuzvininipisa mumwe kunomumwe, nokuti Mwari unodzivisa vanozvikudza, asi unopa nyasha vanozvininipisa.
Tinozvininipisa mumwe kunomumwe nekutenderana neMagwaro ataurwa nechero mumwe munhu. Hatifaniri kuedza kuzviti tinogona kana kuziva tinofanira kungotsigira kuti tinotevera nekurarama Magwaro. Kana muine chipo kana simba riri nani kupinda vamwe, Mwari ndiye akakupai. Saka hazvikuitei kuti muve muri nani pane vamwe vanhu. Mungori nani nekuda kwezvamakagoverwa naMwari. Chero chipo chamakapiwa naMwari, anotarisira kuti muchishandise nekuva muranda kune vamwe, kwete kutonga vamwe. Zvakafanana, kana mumwe munhu akanongedzera Rugwaro rwakasiyana nezvatinotenda isu tese kana zvatinoita, tinozvininipisa kuGwaro iroro, zvisinei nekuti arinongedzera ndiyani.
Mizambiringa miviri yaikura mukereke yemaKristu kubva pakutanga.
Mumwe muzambiringa waive maKristu aishuvira kuti akure pakuwadzana kwawo naJesu votenda kuBhaibheri uye kuti ndangariro dzavo dzisatongwe nezvinotaurwa nevamwe vanhu. Rusununguko rwekunamata Mwari maererano nezvakanyorwa muBhaibheri uye maererano nemanzwiro anoita munhu mumwe nemumwe raive rimi remoto risingagoni kurongwa. Raivirima richienda mativi akasiyana siyana, uye kana rikadzima kumwe raisara richipfuta kumwe. Kazhinji, zvakafanana nevanhu 7000 vainamata Mwari muchivande mumazuva aEria, zvaive zvakavanzwa kubva kumeso evazhinji. Kurwadziswa kusingagumi kwemaKristu kwakamanikidza maKristu kuzvivanza nekuita zvinhu zvavo vakangwarira. Asi zvisinei nezvavaisangana nazvo, kwaigarova nevanhu vanosimudzwa naMwari vaive nerudo rwekutenda kune zvakanyorwa muBhaibheri chete. Ava kazhinji vaive mapoka asingaonekwe, vakazvininipisa vaida kushandira Mwari murunyararo nekuita mabasa akanaka apo vaikwira makomo nemharidzo semutemo wavo pakurarama.
Hakuna simba rechero munhu, zvisinei nekuti aive akakura sei, raitenderwa kusudurudza simba reMagwaro akanyorwa.
Muzambiringa uyu wakaenderera mberi kusvika nhasi uno. Vanganamata mukereke, asi “havasi” vekereke iyoyo sezvo ivo vari vaJesu Kristu uye vanotsvaga chete kuterera Bhaibheri rake, kunyange izvi zvichivashaisa mbiri nekuita kuti vasadiwe. Vanoda rusununguko rwekuzvifungira, vogutsikana kuti pfungwa yavanenge vabata inobva muMagwaro. Vanobva vatenda kupfungwa iyi nekuti Bhaibheri rinotaura izvozvo, kwete nekuti mumwe munhu ataura izvozvo. Havanzwi vachisununguka kuti munhu amire pakati pavo naMwari, kunyanya nekuti munhu wese ane kutadza kwake. Hakuna Mwenga anoda kuti mumwe munhu amire pakati pake nemurume wake. Hakuna Mwenga anoda kuzvininipisa kune zvinotaurwa nechero mumwe murume, asi kune zvinotaurwa nemurume wake chete. Nenzira imwechete Mwenga waMwari anozvininipisa kuna Ishe Jesu Kristu.
VaRoma 3:12 Vakatsauka vose, vakava vanhu vasinamaturo, Hakuna unoita zvakanaka, kunyange nomumwe chete;
JEREMIA 17:5 Zvanzi naJehovha, "Ngaatukwe iye munhu unovimba nomumwe munhu, unoita nyama yomunhu ruoko rwake, unomoyo unotsauka kuna Jehovha.
Kana maKristu akavimba nevatungamiri vavo, vanobvisa meso avo pana Mwari. Tinobva tafunga kuti tiri kubatira Mwari, asi tinenge tiri vakatukwa. Kutukwa kukuru kwenguva yekereke yekupedzisira, nguva yedu yatiri, ndepatinoguma tava munguva yeKutambudzika kukuru. Ndipo patichazoona kuti takatukwa pachokwadi.
Zvino mumwe muzambiringa wenhema wakabva watanga waizokura kuva kereke inotonga. Vatungamiri vekereke yakarongwa nevanhu iyi vaipa kuturikira kwavo kwavanoita Bhaibheri nemazano avo evanhu akachenjera kuvanhu. Muzambiringa wenhema uyu une vanhu vanotarira kumunhu mutsvene, iye ovaudza kuti votenda mune zvipi. Satani aizoshandisa vanhu vanotungamirira ava kutonga vanhu, uye kuvaudza kuti vatende mune zvinhu zvinotsauka kubva paTestamente Itsva. Kuchengetedzeka kwavo kuri pakuzviti ndevekereke yakasarudzika, pachinzvimbo chekuzviti ndevaKristu. Nhasi kune masangano emakereke akasiyana-siyana anosvika 45000, ese anoti ane chokwadi, asi ese akatsanangurwa kuti mapofu. Kereke yeRoman Catholic inoonekwa zviri nyore sekereke hurusa uye yakurisa pakati pemasangano aya ese. Inokudza mutsetse mukuru wevabati panyika. Vanhu vanofanira kuzvininipisa kuvanhu vanovatungamirira vanonzi havatadzi, vakudaidzwa kuti maPope, kunyange asingatenderane nezvakataurwa naPope akadarika.
Mizambiringa iyi yese yaiyevedza zvichibva pamabasa avaiita ekubatsira nerudo rwaiitwa nemaKristu. Kubatsira uku kwaive chombo chekuita kuti chiKristu chibudirire. Vaichengeta nherera, chirikadzi, nevarombo nevanoshaya. Kuita kwavo munzvimbo dzinogara vanhu kwaionekwa munguva dzematambudziko dzakaita senzara, kudengenyeka kwenyika, hosha, nehondo. Vaive vachipa mari, zvinhu uye nguva yavo.
Mapositora paakatanga kereke yekutanga, Testamente Itsva payakanyorwa, maapostora akabva abva. Vaive vaedza kutanga makereke aitungamirirwa nemapoka evakuru vaichengetedza zvaive zvarehwa nevapostora, nezvaive zvakanyorwa muTestamente Itsva. MaKristu ese akaponeswa vaive vaprista, uye mukuenzana kwehama uku kwaive kusina chiprista chaAroni chakasimudzirwa chevanhu vakakosha. SaJohane Mubapatidzi, vaparidzi vainongedzera vanhu kuna Kristu neShoko rakanyorwa, kwete kuzvinongedzera ivo.
Kana munhu waMwari mukuru akataura, munenge musina kumunzwa achitaura nekuti materera mazwi ake. Munenge mamunzwa achitaura kana mukatevera Jesu kupfurikidza mapeji eBhaibheri rakanyorwa.
Asi pane chiedza, panewo mimvuri. Satani akashanda zvisina zororo kuti asimudzire chiprista chevanhu chemabasa ehushumiri hushanu pakati pevanhu naMwari. Zvichibva kuna Satani, kunofanira kuva nemhunhu pakati pako neShoko. Hushumiri uhu, pahwakakunda kugamuchirwa semisoro yekereke yega yega, hwakapedzisira hwabvisa vanhu kubva pane zvakanyorwa muMagwaro. MaKristu paakasiya kutevera Magwaro zvakazara, vakavarairwa, tsangadzi yenjere nemazano evanhu nehukuru hwevanhu yakadyarwa pakati pembeu yeShoko raMwari. Zviri nyore kwazvo kubvumirana nemunhu anotonga anova mutungamiri wekereke, pachinzvimbo chekuedza kumupikisa. Kana mukatenderana naye, anokuitai kuti munzwe muine mbiri kwazvo. Kana mukamupikisa, anokuitai kuti munzwe musingadiwe zvachose. Saka anotitonga nekuda kwedu uye shuviro dzedu dzekuva nhengo yekereke, kwete neMagwaro.
Chitendero chechipegani kazhinji chaiita chiprista chakadzidza.
Alexander Mukuru, nekuda kwezvaakakwanisa kuita muhupenyu hwake zvaidakadza, aive akutonamatwa saMwari kumabvazuva, akazviwanira mubairo wehumwaro kumadokero. Kumabvazuva kwakaenda Kaini, vainamata vabati vavo sanamwari vavo. Iyi yaive isiri tsika yaiitwa kumadokero. Alexander ndiye aive munhu wekutanga wekumadokero wekuenda kumabvazuva achibva kuGreece akatambirwa kuEgipita “semwanakomana wamwari”. Mwari wavo ainzi Amun Ra, nekuda kwekukunda kwake kukuru mudzihondo. Akapamba Persia, akaenda kuAfghanistan, uye nekuda kwehutsinye hwake hukuru kwazvo uye kuuraya vanhu kukuru, vakadzi, nevana, uye kugona kwake kuroora vanasikana vevanhu vane simba munezvehondo muAfghan, akava iye munhu wekutanga kupamba nekukunda Afghanistan. Akabva azviita “mwari”, kunyange kuvateveri vake vekumadokero. Kunyange maGiriki ekumadokero aimanikidzwa kumunamata, haana kuzobvira adzokera kumadokero zvakare. Mukati memakore mana ekuzviita mwari, akafa nezvikonzero zvaisanzwisisika kuBabironi. Jesu, aive zvese Mwari uye Mwanakomana waMwari, akaita hushumiri hwemakore matatu nehafu chete. Saka Alexander akazviti ndimwari, nekuti aive nembiri kwazvo pavapambepfumi kumadokero uye aida kuti vanhu vamunamate samwari kuGreece, akaisirwa muganhu wemakore ari pasi pemakore mana. Hakuna munhu angakura kudarika Ishe Jesu. Hakuna munhu angaenzaniswa naJesu, sezvo zvinozotorera munhu iyeye hupenyu hwake. Mwari haadi kukwikwidzwa nevanhu. Isu vanhu hatina maturo pakuedza kukwikwidza muzvikamu izvi.
Vakuru vemauto aAlexander vana vakatora nguvo dzake, asi havana kugona kupamba nzvimbo dzekumadokero, kunyange vaiti humwari hwavo hwaive pachinzvimbo chaAlexander. Pfungwa iyi yemadzimambo anozviita vanamwari yakatanga kuita seyaive yopera kumadokero pakafa vakuru vemauto vana ava, kunze kwemuguta rePergamosi. Sairasi paakakunda Babironi chiprista chechipegani chekuBabironi chaive chatizira kuPergamosi vari pasi pemuprista wavo mukuru aidaidzwa zve kuti Pontiff zita rake ainzi Attarasi. Mumashure mekufa kwaAlexander mukuru wemauto ake Lysimachus akava mubati wePergamosi, akazviti aive mwari saAlexander. Hushe hwePergamosi hukakura nekubudirira. Pakauraiwa Lysimachus, muprista mukuru wekuBabironi akaita mambo, akazvitiwo aive mwari, sezvakaita Lysimachus, mutsetse wemadzimambo eAttalid wakabva watanga. Vanhu vaive madzimambo uye vamwari ava vaitambirwa munzvimbo dzavo chete. Kusiyana kwavakaita naAlexander ndekwekuti havana zvinhu zvikuru zvavakaita kana budiriro yavakaita kuti vakwezve vanhu vazhinji. MaGiriki vaive vakachenjera kwazvo uye vari pamusoro pakureverera kutadza, nekuda kwemano avo munezvezivo uye kuturikira kwakachenjera. Kufunga kwavo kwakachenjera kwakanatsa kukaparadzira zvakavanzika zveBabironi, uye zvakavanzika izvi nemazano azvo ekuti vanhu vaivatungamirira vaive vamwari vavo zvakaiswa kuRoma muna 133 BC apo mambo aive mwari wekupedzisira wePergamosi, Attarasi III, paakafa. Zvakavanzika zveBabironi zvaive nekukosha kukuru pakati pemapegani, asi zvaive zvisingatariswi kuRoma nekuti hakuna muprista mukuru kana Pontiff aive ambowana mubairo kana mbiri. Jurio Kesari akabva akwereta chikwereti chikuru kwazvo kuti aite chiokomuhomwe kuti asarudzwe kuva muprista mukuru kana Pontiff wezvakavanzika zveBabironi muna 63 BC kuRoma. Nguvo dzinoyevedza dzemaPontiff, uye mitemo yekuBabironi, zvaipa chiprista chepamusoro chiremera pakati pemahedeni. Pasi pembiri yaJurio Kesari, mutongi weRoma akaita mbiri kwazvo kudarika vose, zvakavanzika zveBabironi yekumabvazuva zvakaita simba uye kutonga. Guta rePergamosi rakaita Kesari mwari muna 29 BC, chinguvana mumashure mekufa kwake. Jurio Kesari akabva aita munhu wekutanga muRoma kunamatwa samwari. Mavara ekutanga emazita ake, J, K, akafanana neaJesu Kristu. Kesari akatora muzukuru wehanzvadzi yake Augusto kuti agomutsiva. Mubati Augusto akanamatwa samwari muPergamosi asati afa. Tsika dzekunamata vabati, sezvo aive Pontiff wezvakavanzika zveBabironi, dzakatsvaira muhushe hwese senzira yekubatanidza marudzi ese aive akasiyana. Negore 400 AD, bhishopu weRoma aive atora chinzvimbo chaPontiff, zvakaita kuti Pope ave muprista mukuru wezvakavanzika zveBabironi. Saka zvakavanzika zveBabironi zvakapinda mukereke yeRoman Catholic zviri pamutemo, zvichibva zvaishandura kuita Babironi yakavanzika. Kereke yeRoman Catholic izvozvi ine chiprista chakarongeka chakasimudzirwa pamusoro pevanhu vari musangano zvakangofanana nemaPegani.
Satani akakurudzira kereke yeRoman Catholic kuti isarudze maprista pamusoro pevanhu, saka zvakadzosera kereke yeRoman Catholic pakuita kweTestamente Yekare kwechiprista chaAroni. Vakabva vagadzirisa kuita uku vakaita mabhishopu pamusoro pemaprista.
Chimiro chekereke yeRoman Catholic chinongotevedzera chimiro chehushe hwenyika hweRoma, nabhishopu mumwechete achitonga guta rimwechete nenzvimbo dzakaripoteredza. Bhishopu weguta guru repurovhinzi, metiroporiteni, aive nedzimwe kodzero dzaaive nadzo pamusoro pemamwe mabhishopu mupurovhinzi. Mametiroporiteni ndiwo akazoitwa maachibhishopu anotonga mabhishopu emupurovhinzi. Makore akapoteredza 700 AD makadhinari akavapo muhurongwa uhu akaiswa pamusoro pemaachibhishopu.
Saka pakavakwa chimiro chekereke kubva pahudzvanyiriri hwaPope ane simba guru pamusoro pebato iri. Kukura kwebato rinenge gomba reshumba iri hakuna nheyo dzakafanorongwa, asi rinokura nenzira dzinenge dzisingafungidzirwi apo kereke inotarisana nezviitiko zvakasiyana zvinenge zvaiwira, chipope chakabva chawira zviri pamusoro mumaoko akakodzera, vanomanikidzira kutonga pamusoro pemaKristu ese, uye maoko asina kukodzera vanokanganisa kana kudzosera shure kubudirira uku.
Bato rekereke rakarongwa iri reRoman Catholic, rine masimba anodakadza pakukunda kuipa kwehushe hweRoma huri kuparara, rakatevedzerwa pakati pemasangano asiri maCatholic ivo vachiisa vanhu vanobata mabasa ehushumiri hushanu vakasimudzirwa kuti vamire pakati pemaKristu naMwari. Kuti zvifambe zvakanaka paidiwa munhu mumwechete kuti ave musoro wehushumiri hwemabasa mashanu uhu, saka “pasita” (mufudzi), akataurwa nezvake kamwechete muTestamente Itsva, akakura semushumiri akatsvedza zvisina makwikwi achienda pakunoita musoro wekereke imwe neimwe. Mabhishopu akazosimuka pamusoro pemapasita mumaguta. Maachibhishopu nemapatiriyaki vakazonyukawo pamberi nekukura kwaiita mapato ezvechitendero aya. Pachinzvimbo chekuti makereke abatwe nenzira yerunyararo nevakuru, yakaiswa kuhutungamiri hwesimba remunhu mumwechete. Rusununguko munezvemweya rwakazarura nzira kuhudzvanyiriri.
Mwari akasarudza maJuda kuti apatsanurwe kubva kune mamwe marudzi kuti vasavodzwe nekurudziro dzevahedeni. MaJuda vakadanwa kuti vave vanhu veBhuku. Hakuna chimwe chitendero chekare chakabvira chakasungirwa paBhuku Dzvene rimwechete. MaKristu anorarama zvizere neTestamente Itsva, vasina kuita kereke yakarongwa nehutungamiriri, kazhinji havatariswi kana kuonekwa. Kukura kuri kuita zvinzvimbo muzvitendero zvakarongwa nevanhu kwakatora kukosha uye kwakakwezva meso evaya vanotarisa nhorondo.
Kune mamwe maHedeni, vakayevedzwa zvakanyanya nechitendero chemaJuda chekutenda muna Mwari mumwechete, inodaidzwa muChirungu kuti monotheism. Kune mamwe maHedeni vakayevedzwawo zvakanyanya nechitendero chemapegani nekuda kwevamwari vavo vakasiyana siyana vetiriniti. Saka nyaya dzakapoteredza huMwari dzakaparadza makereke sezvadzichiri kuita nhasi.
MaJuda haana kusarudzwa nekuti aive akanaka. Iyi yaive sarudzo yaMwari. Uye isu vanhu hatina simba renjere rekunzwisisa kuda kwaMwari. Kutadza kwekereke yekutanga kwaive kwekusaramba vakazvininipisa pakuita kuda kwaMwari. Havana kugona kutevera hutungamiri hweMweya Mutsvene. Vaida munhu anotungamira kuti avaudze zvekuita.
Muzambiringa wechokwadi unotora kuda kwaMwari kwakaziviswa sechinhu chinoda kuitwa nemoyo wese. Bhaibheri ndiro rinobva raita kambasi yavo yemweya, inovatungamirira kurutivi rwavanenge vachifanira kuenda. Zvose zviri munhorondo zvinenge zvichifanira kuumbwa nedzidziso dzeBhaibheri dzakarurama, uye kuedza kwaSatani kupikisa kuparidzwa kweShoko rakanyorwa kune mano uye kuipa kukuru mumasenturi anotevera.
Kereke yekutanga yaive muviri wakarukwa pamwechete vaigovana zvese zvavaive nazvo, uye kugovera mari zvichienderana nekushaiwa kwevanhu mumwe nemumwe. Mbatya dzaipfekwa kusvikira dzabvaruka dzimwe mbatya dzaive nevanhu dzaigoverwa kune vasina. Hupenyu hwavo hwaive hwakareruka. Kristu aive asina kubvisa vanyai pakati pevanhu naMwari chete, asiwo pakati pevanhu nevamwe vanhu.
MaKristu aizotarisana nekutambudzika uye kurwadziswa. Asi kushungurudzwa uku kwese kwaisimbisa kutenda kwavo. Kutambudzwa kwakavaparadzira, kukawedzera nzvimbo dzaizobata kereke. Kutanga kwekuwanda kwemabasa emamishinari kwaive muchiKristu chekutanga, sezvo kwaive kutenda uko varume nevakadzi vaizvipira kufira.
ChiKristu chekutanga chaive chisiri chembwende. Hakuna aingoedza kuva mumwe wavo asina kudanwa naMwari. Hwaro hwavaibata nahwo hwaive hwepamusoro-soro. Uye miedzo yaivawira yaive mikuru kwazvo.
MABASA 5:13 Asi pakati pavamwe kwakanga kusinomunhu wakatsunga kuzviisa kwavari; asi vanhu vaivakudza
Aya aive asiri makereke ane hutefe-tefe umo vanhu vaive vachinzwa vakazvikwanira mumabasa avo.
Kukura kwechiKristu kwakaita sekwaive kusingatambiriki uye kusingatarisirwi kuti kungaitike muzviitiko zvaive mutarisiro dzevanhu. Mwari aiita kuda kwake, kwaive kusiri muhurongwa hwechero bato rakatangwa nevanhu. Kuregererwa kwezvivi kupfurikidza kutendeuka, uye kuyanana neMuponesi paruzhinji kupfurikidza rubapatidzo rwemvura muZita raShe Jesu Kristu, zvakakwezva vanhu avo munguva dzaive dzakaoma uye dzichityisa vaive vaneta nekurarama, uye vachitya kufa. Hupenyu husina zvivi uye hunhu hwakanaka mumagariro zvakavagonesa kurarama vakachena mukutsvaga Mwari. Izvi zvaivapa rugare mumoyo yavo.
Rubapatidzo chaive chinhu chaiitika paruzhinji chaitsaura maKristu kubva munyika.
Petro aive nekiyi imwechete yaigona kutisunungura kubva kuzvivi zvedu kuti tigone kupinda Denga. Kiyi iyoyo yaive dzidziso yekutendeuka. Tendeukai mukanganwirwe zvivi, mubve mabapatidzwa mumvura kuti muzive Zita raMwari paakava munhu. Jehova wemuTestamente Yekare, nemamwe mazita ake mazhinji airatidza masimba ake emweya akasiyana-siyana akazova Munhu, isu tinofanira kumuziva neZita rake remunhu, Jesu Kristu.
MATEO 16:19 Ndichakupa (Jesu achipa Petro) kiyi dzovushe hwokudenga. Chinhu chipi nechipi chauchasunga panyika chichasungwa kudenga nechinhu chipi nechipi chauchasunungura panyika chichasunungurwa kudenga.
Petro akatisunungura kubva kuzvivi zvedu kupfurikidza kuzarura mukova weKudenga kuMwenga waKristu, kuti agone kupinda kana tatendeuka tabapatidzwa muZita raShe Jesu Kristu. Mukuita izvi akapfiga mukova weKudenga waive wazarurwa naJohane Mubapatidzi nerubapatidzo rwake rwekutendeuka. Johane akabapatidza asati aziva Zita reMuponesi.
Rubapatidzo mucherechedzo wekufa, kuvigwa nekumuka. Izvi zvaive zvisati zvaitika kuna Jesu Johane achiri mupenyu.
VAROMA 6:3 Ko hamuzivi here kuti isu takabhabhatidzwa muna Kristu Jesu, takabhabhatidzwa murufu rwake?
4 Naizvozvo pakubapatidzwa takavigwa pamwe chete naye murufu; kuti saiye Kristu akamutswa kuvakafa nokubwinya kwaBaba, saizvozvo nesu vo tifambe novupenyu bwutsva
5 Nokuti kana takava vamwe naye pakufanana naye, parufu rwake, tichadaro vo pakumuka kwake;
Saka Petro akatendeudza kiyi, akapfigira rubapatidzo rwaJohane rwaive rwasungwa rwusisashande, sezvo rwivepo kwechinguvana.
Zvaive zvakakosha kunzwisisa chinhu ichi apo dzidziso dzekereke yekutanga dzakaitwa naPauro, aive mupostora akanga akanangana nevaHedeni zvakanyanya.
Saka Pauro, semutumwa kunheyo dzekereke yeEfeso, akazadzisa zvaive zvaitwa naPetro, nekusungawo rubapatidzo rwaJohane nekusunungura rubapatidzo rwaPetro.
MABASA 19:1 Zvino Aporo achiri paKorinte, Pauro wakati agura namativi enyika okumusoro, akasvika Efeso, akawana vamwe vadzidzi,
2 akati kwavari: Makagamuchira Mweya Mutsvene pakutenda kwenyu here? vakati kwaari kwete, hatina kutongonzwa kuti Mweya Mutsvene uripo.
3 Akati: ko makabapatidzwa norubapatidzo rwupiko? Vakati: Norubapatidzo rwaJohane.
4 Zvino Pauro akati: Johane wakabhabhatidza norubhabhatidzo rwokutendevuka, achivudza vanhu kuti vatende kunaiye unozovuya shure kwake, iye Jesu Kristu.
5 Vakati vazvinzwa izvozvo, vakabapatidzwa muzita raShe Jesu,
Vadzidzi ava paEfeso vaive vabapatidzwa nerubapatidzo rwaJohane. Pauro akati kwavari, “Kana musina kubapatidzwa nenzira yakabapatidza naPetro ‘muZita raJesu Kristu’, rubapatidzo rwenyu harwurevi chinhu, munofanira kubapatidzwa zve zvakanaka”. Chikamu chedzidziso dzevapostora ichi ndicho chatinofanira kudzoserwa kwachiri.
Rubapatidzo ibasa kana kunyudza mumwe munhu mumvura, mashoko akataurwa naPetro anobva ataurwa pamusoro pemunhu iyeye ari kubapatidzwa. Saka zvakakosha kubapatidza muZita raShe Jesu.
Asi, sezvo kutendeuka nekubapatidzwa muZita raJesu zviri kiyi inozarura mukova weDenga kuMwenga waKristu, zvicharwiswa naSatani. Makereke achanyuka asingazoparidzi nekuda kwekutendeuka kubva kuzvivi kunobva pasi pemoyo kunotungamirira munhu kuti asangane nekuzvarwa patsva, apo Jesu anogamuchirwa seMuponesi muhupenyu hwemunhu anotendeutsa munhu kubva kuzvivi, obata ndiye hupenyu hwemunhu iyeye. Zvino Zita raMwari reMunhu, Jesu Kristu, rinobva rarwiswa kupfurikidza kudzikisira Jesu kusvika pachinzvimbo chekuva Mwanakomana waMwari chete saka Zita raJesu Kristu rinobva rabiswa parubapatidzo rwemvura. Nekukasika zvinzvimbo zvitatu zvinobva zvatsiva Zita raJesu Kristu parubapatidzo.
MATEO 28:18 Ipapo Jesu wakasvika akataura kwavari, akati, Ndakapiwa simba rose kudenga napanyika.
Jesu ndiye Mwari Wamasimba ose.
MATEO 28:19 Endai naizvozvo mudzidzise marudzi ose, muvabapatidze muzita raBaba nero Mwanakomana neroMweya Mutsvene.
20 Muvadzidzise kuchengeta zvose zvandakakurairai imi. Tarirai ndinemi mazuva ose, kusvikira pakuguma kwenyika.
Jesu ane simba. Kaviri kaakataura kuti tinofanira kudzidziswa. Saka pane chakavanzika chakadzama pano.
Bapatidzai muZita (rimwechete) raBaba Mwanakomana naMweya Mutsvene.
Muna Mwari mune Vanhu vatatu, Zita raBaba ndiJehova. Zita reMwanakomana ndiJesu Kristu. Mweya Mutsvene hauna Zita muMagwaro. Saka tinosara nemaZita maviri evanhu vatatu. Ichi hachisi chinhu chakanaka. Kuwedzera kuipa kwazvo, Jesu akati tinofanira kuita Zita rimwechete kuvanhu vatatu ava vose. Izvi hazvigoneke.
“Tiriniti”, “vatatu -mumwe”, “vekuita kumwechete”, “vechinhu chimwechete”, ndiko kutaura kwatinowana kubva muzivo nehuchenjeri hwemaGiriki, kwete muBhaibheri.
Saka Petro akaona kuti kuzara kwevuMwari kwakagara muna Kristu pamuviri.
VAKOROSE 2:8 Chenjerai, kuti murege kutapwa nomunhu novuchenjeri, nokunyengera kusinamaturo, achitevera tsika dzavanhu nezvokuvamba zvenyika, asingateveri Kristu.
Baba vaive Mweya waMwari waigara pamusoro pemaJuda. Mweya uyu wakagara mumuviri waKristu, ukamuiita Emanuere kana zvichishandurwa Mwari unesu. Munhu wenyama uyu aive Mwanakomana waMwari. Mweya waive maari ndiwo waive Baba.
MATEO 1:23 Tarira mhandara ichava nemimba, ichazvara Mwanakomana, vachamutumidza zita rinonzi Emanuere, ndokuti kana zvichishandurwa, Mwari unesu.
Mwari aive pamusoro pemaJuda ari Baba. Akazova nemaJuda seMwanakomana, kuti aripire muripo wezvivi kupfurikidza kufa kwake. Ipapo ndipo paizokwanisa Mweya Mutsvene, wakabuda mumuviri wake pawakafa, kudzoka matiri sevatadzi vakatendeuka wogara matiri.
Makristu akakanganisa zvikuru nekutaura kuti Petro kuna Mabasa avaApostora 2:38 akarwisa Jesu paakataura kuna Mateo 28:19 saka ivo vakagara mune zvakataurwa naJesu. Asi Jesu akati vanofanira kuva neZita rimwechete pakubapatidzwa, kwete mazita ezvinzvimbo zvitatu. Saka maKristu akarasikirwa nezita raMwari, nekuti hakuna Zita rimwechete rekudaidza Vanhu vatatu vari muhuMwari hweTiriniti yavo. Vakarambawo vachiti kukanganisa kwekuti kiyi yeDenga uye rubapatidzo muZita raJesu rakashandiswa naPetro kuzarura Mukova kumaKristu enguva yekereke yekutanga. Kuedza kugadzirisa maapostora chinhu chakaipa kuti tiwanikwe tiri machiri. Tinofanira kudzoserwa kwavari nezvavakatenda mazviri.
Pashure pazvose, Baba naMweya Mutsvene havana kubvira vatifira. Havana kubvira vavigwa - mungaviga sei Mweya? Saka havana kubvira vamuka kubva kuvakafa. Saka rubapatidzo haruna charunoreva pamusoro pavo sezvo ruchitaura pamusoro pekufa, kuvigwa pamwe nekumuka kwaJesu.
Kuzara kweMweya waMwari kwaive muna Kristu kukabuda maari paakafa. Waive mutumbi kana muviri waJesu waive wafa wakavigwa. Jesu ndiro Zita raMwari reMunhu. Akafa sezvatinoita isu, seMunhu.
Vazhinji vemaKristu ekutanga vaive maJuda, saka pakutanga maKristu ainzi maJuda. Muna AD 50 mubati weRoma Kraudio akadzinga maJuda kubva muRoma, maKristu akadzingwa pamwechete navo. Izvi zvakazarura nzira kuti chimwe chiKristu chechiRoman Catholic chisimuke chisina hupikisi kana vanochigadzirisa. MaKristu aive akadzingwa paakatenderwa kudzoka pakafa Kraudio muna 54 AD, kwakaita mapazi maviri echiKristu. Rimwe raitevera kudzidzisa kwemapostora kwaPauro, apo rimwe raigadzirisa Evangeri kuti rive chiRoman Catholic. Raive iri bazi rakazova nekutonga muRoma.
MABASA 18:1 Shure kwaizvozvo, Pauro wakabva Atene, akasvika Korinte;
2 Akawana mumwe muJudha, wainzi Akwira, chizvarwa chePonto, achangobva Itaria, naPrisira mukadzi wake; (nokuti Kraudio wakanga araira kuti vaJudha vose vabve Roma) akaenda kwavari;
Mubati Nero akatanga humhondi hwekurwadzisa maKristu pakati pemoto mukuru weRoma muna 64 AD nekufa kwake muna 68 AD. Vazhinji vemapostora ekutanga vaive vafa kana kuti vaive vaenda kunze kwemiganhu yehushe hweRoma panguva yakazofa Nero. Mukati menguva yekuuraya kwaNero, muna 66 AD Nero akaraira mukuru wemauto Vaspasian kuti apambe Jerusarema, kwaive kwauraiwa Jokobo mupostora makore akawanda aive adarika. MaKristu aive muJerusarema akatiza. Zvichibva kune venhorondo yemaKristu ekutanga, vamwe vakaenda kuguta raive pedyo rePera. Zvino kuparadzwa kweJerusarema kwekupedzisira muna AD 70 kwakabvisa kereke huru yemaKristu yaikwanisa kuonekwa seyaive yakakosha kudarika kereke yaive muRoma. Saka zvakabva zvava nyore kuti vanhu vasimuke vatungamirire makereke achipinda mukutadza kupfurikidza kubva pane zvakanyorwa muBhaibheri zvishoma nezvishoma.
Kurwadziswa kwakabatanidza maKristu ekutanga. Vainamata muchivande vachitya kusungwa. Kushambadzwa chaive chinhu chinotyisa kwavari. Makereke ekutanga chaiwo aive akareruka uye ari mudzimba dzevanhu dzaizogadziriswa mukati kana vanhu vakati wandei. Mumashure megore 312 AD ndipo pakazoshambadzwa makereke achitanga kupindira muzvivakwa zvikuru zvaive nyore kuonekwa. Izvi zvakatanga mubati Constantine amisa kuuraiwa nekurwadziswa kwemaKristu.
BHUKU RENGUVA DZEMAKEREKE NGUVA YEKEREKE YEEFESO.
Chamunofanira kuita chete kurangarira kufamba kwaMwari muMweya .... Vaive .... vainamatira mudzimba kana zvivakwa zvezvitoro zvakasakara. Vaive nechokwadi. Asi yaive isiri nguva refu kusvikira pavakatanga kuwana mari inokwana kuvaka makereke akanaka matsva. Vakaita bato rechitendero vakaita kuti ritungamirirwe nevanhu.
Bato rechiKristu rakatangira mudzimba zvine mufaro. Parakakura rakabuda kunonamatira muzvivakwa ‘zvemakereke”. Zvivakwa izvi zvaive zvisina kubvira zvanzi zvinodiwa mumazuva eTestamente Itsva. Kuronga vanhu muchivakwa chekereke zvinozoita kuti hutungamiri hwemunhu mumwechete uye tsika dzakaitwa nevanhu nezvitendero zvakaitwa nevanhu zvitange. Satani akagara achishandisa nzira iyi ichibudirira kwazvo, kunyanya munguva yedu yatiri kurarama. Anounza shanduko zvishoma nezvishoma dzisingaonekwi nevaya vasina kungwarira.
Kutanga kereke yeEfeso, isingangomiririri nguva yekereke yekutanga chete, asi yaivewo nheyo dzemakereke ese aizouya, Pauro akadaidza vakuru veEfeso kuguta reMireto. Mireto raive guta rekutanga munharaunda iyi kuita purani yemigwagwa yaive muzvikamu zvakarongeka yaipesana mumakona, semaguta ariko nhasi uno. Saka iyi yaive nzvimbo yakanakisa kuti Pauro agadze purani yekufambisa kereke panguva yeEfeso, nedzimwe nguva dzemakereke dzese dzaizotevera.
MABASA 20:27 Nokuti handina kutya kukuparidzirai kuda kwose kwaMwari.
28 Zvichenjererei imi, neboka rose ramakaitwa vatariri varo noMweya Mutsene, kuti mufudze kereke yaMwari, yaakatenga neropa rake.
Hutungamiri hwevanhu hunozopindira nevanhu vachiti, “nditeverei” --- Munhu mumwechete, semusoro wekereke, kwete boka revakuru.
Kubva mubhuku raStrong reduramazwi:
“vatariri” muchiGiriki vanonzi episkopos zvinorevawo kuti ‘bhishopu’ .
Saka vakuru vatinoti maeredha ndivowo mabhishopu kana kuti vatariri vekereke.
“puresibheterio” ndiyo puresibheterio yemuviri wevakuru.
Saka puresibheterio, vatariri, nemabhishopu angori mamwe mazwi anoreva zvakafanana nekuti vakuru kana kuti maeredha.
VAFIRIPI 1:1 Pauro naTimotio, varanda vaKristu Jesu, kuvatsvene vose munaKristu Jesu, vari paFiripi, navatariri navaranda vekereke
Kwaive nemabhishopu akawandisa muguta reFiripi. Varume ava vaive vakuru kana vatariri vekereke ikoko.
Petro akabvumira kuti boka revatariri rinofanira kufudza boka. Petro akazvidaidza kuti mukuru, pachinzvimbo chekuti mupostora. Haana kuzviita wepamusoro kana kuzviita ari nani pahushumiri. Akatarisana nekuenzana kwehutungamiri hwekereke, kwete pakusimudzira munhu mumwechete pamusoro pevamwe mukereke, zvinova zvaizoitwa nekereke yeRoman Catholic yaizoisa muprista semusoro wekereke, nabhishopu semusoro wemaprista. Idzi itsika dzavaNikoraiti- kusimudzirwa mwemunhu mutsvene pamusoro pevanhu muungano.
Petro haana kuti mari yechegumi ndeyamufundisi kana pasita.
Tarirai hushumiri hwakanzi hunofanira kubata kereke naPauro.
Hushumiri hutatu chete ndihwo hwakataurwa. Mapostora akatanga chokwadi, uye ndivo vashumiri vakanyanya kukosha. Vasati vafa, dzidziso dzavo dzakanyorwa seTestamente Itsva. Nekuverenga Testamente Itsva, tinenge tichitsvaga ruzivo kubva kuvapostora.
Mwari anotaura nevaprofita, asi vaprofita vanouya pechipiri nekuti kana akataura pamusoro pedzidziso, maprofita vanongotidzosera kune zvakanyorwa nevapostora muBhaibheri. Vanofanira kubvumirana neMagwaro.
Vadzidzisi vanouya pechitatu. Mudzidzisi anowana zaruriro kana kuti mufananidzo wedzidziso kubva kumuprofita, otsigira zaruriro iyoyo neBhaibheri, rakanyorwa nemapostora. Muprofita kana mudzidzisi hapana anogona kupokana nezvakanyorwa nevapostora. Batisisai izvi: Pauro haana kubvira ataura pamusoro pemufudzi anonzi pasita pano.
Nzira iyi yaifanira kuenderera mberi. Tichiri nezvakanorwa nevapostora muTestamente Itsva. Saka kana nhasi vakuru vekereke panzvimbo vakatsvaga ruzivo kubva muTestamente Itsva yakanyorwa nevapostora, vanenge vachiri kubvunza vapostora.
Hapana muTestamente Itsva pakabvira padaidzwa pasita kunzi musoro wekereke.
Izwi rekuti mufudzi (pasita) rakataurwa kamwechete muTestamente Itsva sechikamu chehushumiri hushanu. Saka hakuna mvumo inobva muMagwaro yekuti pasita atonge kereke. Pasita angori nhengo muboka revaparidzi vakasiyana siyana, vari chikamu cheboka revakuru vanotarira kereke.
Saka havasi vakuru vose vanoparidza. Asi vakuru vese vakaenzana. Petro, mupostora, akazvidaidza kuti mukuru paaitaura nevakuru. Mukuru, asiri chikamu chemabasa ehushumiri hushanu, anokwanisa kupa mazano akachenjera kusangano.
I TIMOTIO 4:13 Shingaira pakurava, napakuraira, napakudzidzisa, kusvikira ndichivuya.
Pano zvinoita sekuti kuraira kunosiyaniswa nedzidziso saka kunokwanisa, semuenzaniso, kuva aringori mashoko eshingiso uye ekurudziro. Chero mukuru anokwanisa kuita izvi, kunyange kana asiri muparidzi.
Mumashure mekufa kwemapostora, Mwari aida kuti mapoka evakuru vatarire kereke imwe neimwe yepanzvimbo nekuita kuti kereke imwe neimwe ive yakatendeka kudzidziso yemapostora. Asi zvishoma nezvishoma “mabhishopu” akatanga kutaurwa kakawanda sevatungamiri vekereke.
Venhorondo vanoti mukati memazera maviri mumashure mekufa kwemapostora, mukuita kwakavanzwa, bhishopu neimwe nzira akasimuka kuva mukuru kana musoro wekereke. Matemberi emapegani ese aive nemunhu mumwechete, muprista, semusoro wesangano rega rega. MaKristu zvishoma nezvishoma akatanga kutevera muenzaniso wemapegani uyu. Antiokia raive guta nhorondo yekereke yaro yaitarisirwa pamusoro -soro. Ignatius wekuAntiokia, akafa imwe nguva gore ra 117 AD risati rasvika, akazviti aive bhishopu weAntiokia, akataura kuti bhishopu wepanzvimbo wemuguta aive mumiririri waMwari panyika akati “Tinofanira kuona bhishopu saMwari pachake”.
Bhishopu semusoro wekereke muguta yaive pfungwa itsva yakabata ndangariro dzemaKristu. Iyi yaive nzira yaizoitwa nayo zvinhu neruzhinji. Uku kwaive kusimudzirwa kwemunhu kusiri muMagwaro kuti ave musoro wekereke. Kuita munhu musoro wekereke kwaive kusina kubva muMagwaro, zvino kumuenzanisa kana kumufananidza naMwari kwaive kwakaipa zvachose. MaKristu, vachifunga kuti iyi yaive nzira yakanaka yekurwisa kuipa, vaikudza tsika dzavaNikoraiti kunova kusimudzirwa kwemunhu mutsvene pamusoro pekereke. Mabhishopu aive akuonekwa ari pamusoro pepuresibheterio kana kuti vakuru. Chiprista chechiAroni chaive chatanga kuvakika zvakare chinomira pakati pevanhu naMwari. Kereke yaive yavarairwa kwazvo pakutora kutadza uku nekukushandisa. MaKristu akava asinehanya pakuchengetedza kutenda kwawo zvakanaka muzvirevo zvezvakataurwa nevapostora, (kana kuti vaive vavarairwa kwazvo zvekutadza kutsvaga zvavanotenda kubva muMagwaro) makereke akazvipira kuva nemunhu mumwechete semusoro wekereke. Sezvazviri nhasi.
Kusarudza bhishopu kunokwanisa kuoma kwazvo mune dzimwe nguva pakereke yepanzvimbo. Fabiani wekuRoma akasarudzwa nekuti njiva yakamhara pamusoro wake. Kereke yakafungidzira kuti yaive sarudzo yeMweya Mutsvene.
Asi panguva yakapera nguva yekereke yekutanga muna 170 AD zvaive zvajairika kuita bhishopu pamusoro pekereke yega yega muguta. Vakuru vaive vakuonekwa sevanhu vari pasi pemabhishopu. Vatariri vaive vakurasikirwa nekukosha kwavo mukereke. Nyembe nezvigaro zvaive zvatora nzvimbo yehutungamiri hwekereke.
Kereke yakatanga kuzviona sebato repasi rese sezvaive hushe hweRoma.
Kereke yakatendera kuti mamiriro ezvinhu mairi abate pakukura kwayo. Yakava bato rezvemagariro nekubata mukurarama kwevanhu. Yakava bato raiterera mirairo yevanhu, kwete boka revanhu vaive nerudo naJesu, vasina kusunganidzwa nekubatanidzwa nezvinhu zvakaita serubapatidzo, chirairo, kushambidza tsoka, uye kutenda kwavo muShoko rakanyorwa.
VaRoma vaive neruzivo rwakakura mukufambisa zvinhu nezvinyorwa, mapato ese akatanga kukudza kuita uku kwaive kwepamusoro uye kwakarongeka.
Kereke yakava chiRoma zvakanyanya muhurongwa hwayo nezviito zvayaiita zvakaita sekupa varombo zvekudya.
Nzvimbo dzakasiyana mutsika dzakasiyana zvaifanira kugara zvakafanana. Saka vabati vaifanira kufamba munzvimbo dzakasiyana siyana kuti vave nechokwadi kuti zvinhu zvaive zvakafanana nzvimbo dzese.
Negore 170 AD nzvimbo imwe neimwe yaigara vanhu yaibatwa nevanhu vakadzidza basa, pamusoro pavo paive nemabhishopu, uye bhishopu aimiririra vanhu. Nzvimbo dzese dzaigara vanhu vaive chikamu chekereke yepasi rese yeCatholic (sezvakataurwa naIgnatious aive wekutanga kushandisa izwi iri rekuti “Catholic”). Makanzuru emabhishopu aidanwa vachiisa pamwechete maonero akafanana enzvimbo dzakasiyana voita kuti zvishandiswe. Zvishoma nezvishoma zvese zvaipasiswa nekanzuru idzi zvakatanga kuvabvisa pakureva kweMagwaro.
Mabhishopu vaive vakuru vaibata munzvimbo dzakasiyana-siyana, kuitira kuti nzvimbo dzakasiyana idzi dzitende muchinhu chimwechete. Nekukasika bhishopu akava mukuru wezvinhu zvese mukereke sebato rinorwisa nyika.
Vanhu vaive vakadzidza vaichengetedza nhaurirano pakati pemakereke vakava nekukosha kukuru sevachengetedzi vekubatana, kutangira mumakereke ese, zvichizoenda pakuva musoro mukereke yavo yepanzvimbo.
Vakabva vadzidzawo chimwe chinhu mubato raishandiswa kutonga nyika neRoma, vakagamuchira chinhu chekuti kereke yaizogona kuzadzisa chinangwa chayo nekutonga hushe hweRoma nebato rakarongwa zvakacherechedzwa zvakadzama uye hunhu. Pasina ruvoko rwebato rakasimba paive nenjodzi yekuti “dambudziko’ raizosimuka.
Uku ndiko kwaive kuwira pasi kweruzivo rwemunhu. Kuedza kurwisa kukanganisa muchitendero kana kuti kutadza munezvedzidziso, kucharamba kuriko setsangadzi mumunda, kereke yakazivisa kukanganisa kukuru --- tsika dzvavaNikoraiti kana kuti hutungamiri hwevanhu vachitungamidza munhu mumwechete.
Nechinhu ichi chaziviswa, maKristu akanaka achifunga kuti bhishopu anofanira kutungamirira kereke, chimiro chekereke chisimo muMagwaro ichi chakateya nhandare yekumwe kutadza kukuru kuti kukunde kereke. Chiedza chekutanga chevapostora chaive chatanga kudzima.
Bhaibheri rinoti ndiyani musoro wekereke?
VAEFESO 5:22 Imi vakadzi, muzviise pasi pavarume venyu chaivo, sezvamunoita kunaShe.
23 Nokuti murume musoro womukadzi, saKristuvo musoro wekereke; iye amene ndiye muponesi womuviri.
24 Asi kereke sezvairi pasi paKristu, vakadzi ngavadaro pazvinhu zvose kuvarume vavo.
BHUKU RENGUVA NOMWE DZEMAKEREKE CHITSAUKO 5 NGUVA YEPERGAMOSI DZIDZISO DZAVANIKORAITI
Mucharangarira here kuti ndakambotaura munguva yeEfeso kuti izwi rekuti, Nikoraiti, rinobva pamazwi maviri echiGiriki: Nikao zvinoreva kuti kupamba, nerekuti rao(Lao) zvinoreva kuti ungano (raiti).
Nikoraiti zvinoreva kuti “kupamba ungano”.
Zvino nei kuine chinhu chakaipisisa ichi? Chakaipa nekuti Mwari haana kubvira aisa kereke yake mumavoko ehutungamiri hwakasarudzwa hunofamba nemafungiro ezvematongerwo enyika. Akaisa kereke yake mumaoko evanhu vakasarudzwa naMwari, vakazadzwa neMweya, vanorarama neShoko vanotungamirira vanhu nekuvapa kudya kweShoko.
Haana kutsaura vanhu kuvaisa muzvikamu kuitira kuti ruzhinji rwutungamirirwe nechiprista chitsvene.
Ichokwadi kuti hutungamiri hunofanira kuva hutsvene, asi zvakare ndizvo vo zvinofanira kuva zvakaita sangano rese.
Tichienda mberi, hakuna nzvimbo muShoko raMwari apo vaprista kana vashumiri kana vamwe vakadaro pavanomira pakati paMwari nevanhu vake, kana hakuna nzvimbo yavanotsaurwa mukuwadzana kwavo naMwari. Mwari anoda kuti vose vamude vamubatire pamwechete.
Tsika dzavaNikoraiti dzinoparadza kuita uku pachinzvimbo dzinotsaura vashumiri kubva kuungano dzoita kuti vatungamiri vave vanashe vevanhu pachinzvimbo chekuva varanda.
Zvino dzidziso iyi yakatanga sechiito chakareruka munguva yekereke yekutanga. Zvinoita sekuti dambudziko riri mumashoko maviri: ‘vakuru’ (puresibheterio) nevatariri (mabhishopu). Kunyange Magwaro achiratidza kuti mune vakuru vakawanda mukereke imwe neimwe, vamwe vakatanga (Ignatius pakati pavo) kudzidzisa kuti pfungwa yaBhishopu yaive yekuva mukuru kana kuva nesimba pamusoro pevakuru.
Zvino chokwadi chenyaya iyi chiri paizwi rekuti “mukuru” rinoratidza kuti munhu wacho ndiyani, apo izwi rekuti bhishopu rinoratidza basa remunhu iyeye. Mukuru ndiye munhu. Bhishopu ndiro basa remunhu iyeye. ‘Mukuru’ rakagara uye richagara richitaura pamusoro pezera remunhu munaMwari. Mukuru, kwete nekuti akasarudzwa kana kuti akagadzwa, nezvimwe zvakadaro., asi nekuti AKURA. Akura pakuberekwa kwake, pakudzidza kwake, kwete rusvava, anovimbika nekuda kweruzivo rwake uye humbowo hwenguva refu hwekugara kwaaita muchiKristu.
…Asi kwete, bhishopu haana kuyanana nehupostora hwaPauro, asi pachinzvimbo vakaenda kuna Pauro panguva yaakavadaidza kubva kuEfeso kuenda kuMireto kuna Mabasa avaApostora 20 muvhesi 17 zvinyorwa zvinoti, “vakuru” vakadaidzwa muvhesi 28 vakadaidzwa kuti vatariri (mabhishopu). Uye mabhishopu aya, (hazvina kupikisa vaive nepfungwa dzezvematongerwo enyika uye nzara yesimba) vakataura kuti Pauro akapa chirevo chekuti “vatariri’ vaive nesimba kudarika vakuru vaive nesimba mukereke yavo yepanzvimbo chete.
Kwavari bhishopu aive ava nesimba rakawedzerwa pamusoro pevakuru vakawanda vepanzvimbo. Chinhu ichi chaive chisiri muMagwaro kana munhorondo yekereke, asi kunyange vanhu vakaita saPorikapi vakatevera kuita uku.
… Pakuronga vakazvitsaura kubva muShoko raMwari, vakazviisa muhupombwe hwemweya.
VAPERGAMO. NGUVA YEKEREKE BHUKU RENGUVA DZEMAKEREKE CHITSAUKO 5
Izvi ndizvo zvakazoitika munguva imwe neimwe kubva ipapo. Mwari akarwira vanhu. Vakabuda nekuda kweropa, vakayananisirwa neShoko, vakafamba mukati memvura dzerubapatidzo vakazadzwa neMweya; asi mumashure mechinguvana rudo rwekutanga rwakatonhora mumwe munhu akaita pfungwa dzekuronga kuitira kuti vazvichengetedze vazviitire zita, vakazvironga kudzokera muzera rechipiri dzimwe nguva kunyange nguva iyi isati yasvika. Vaive vasisina Mweya waMwari, asi rudzi rwekunamata chete. Vakafa. Vaive vazvikudza nenzira dzevanhu nezvitendero nenzira dzavo mavari maive musisina hupenyu.
ZVAKAZARURWA 2:1 Nyorera mutumwa wekereke iri paEfeso, uti: Zvanzi naiye wakabata nyeredzi nomwe murovoko rwake rworudyi, unofamba pakati pezvigadziko zvemwenje zvinomwe zvendarama:
Pauro aive akakosha semutumwa kana kuti nhume kunguva yekereke yeEfeso. Asi tisati tanyanya kufadzwa nemunhu akanakisa uyu, Jesu anotiyeuchidza kuti kune dzimwe nyeredzi nhanhatu, uye vose vanomwe vevanhu ava vane simba ravo uye kurudziro nekuti vakabatwa muruvoko rwake rwerudyi rwesimba.
MATEO 26:64 Jesu akati kwaari ndizvozvo zvawataura; asi ndinoti kwamuri, kubva zvino muchavona Mwanakomana womunhu agere kurudyi rwesimba, achivuya namakore okudenga.
Zvisinei nekuti aive mutumwa mukuru sei kukereke, uye vese vaive vanhu vane simba kwazvo, vachienzaniswa naJesu vaingove nyeredzi muruvoko rwake. Saka aive akakura kwazvo kudarika chero mumwe wavo uye vose. Nyeredzi inopenyesesa inonyangarika kana zuva rikabuda. Nyeredzi inopenyesesa kana kuti mutumwa anonyangarika muchiedza cheShoko raMwari, rinova iro rega rechokwaddi, sezvo Jesu, Zuva rekururama, anobudira mumoyo yevanhu vake.
MARAKI 4:2 Asi imi, munotya zita rangu, muchabudirwa nezuva rokururama, rinokuporesa pasi pamapapiro aro; muchabuda muchitamba semhuru dzomuchirugu.
Saka vatumwa vose varipo kunongedzerera vanhu kuShoko raMwari, nenzira imwechete iyo Johane Mubapatidzi akanongedzerera vadzidzi vake vaviri kuna Jesu.
Aive atsaurwa chete aive mutumwa wekutanga Pauro, sezvo aive nebasa guru rekunyora Shoko raMwari. Uye hakuna anofanira kuedza kupikisa Pauro.
VAGARATIA 1:8 Asi kunyange isu, kana mutumwa unobva kudenga, akakuparidzirai imwe Evhangeri, inopesana neyatinokuparidzirai isu, ngaave wakatukwa.
9 Sezvatakamboreva, zvino ndinoreva zve saizvozvo: Kana kunomunhu unokuparidzirai imwe Evhangeri, inopesana naiyo yamakagamuchira, ngaave wakatukwa.
10 Nokuti zvino ndinoita vushamwari navanhu here, kana naMwari? Kana ndinotsvaka kufadza vanhu here? Kana ndaifadza vanhu nazvino, handizaiva muranda waKristu.
Pauro haaizoedza kufadza mumwe munhu anotungamirira. Aive Magwaro aainyora kana kugara arega.
Jesus alone is seen walking amongst the candlesticks. No other human being.
Mutumwa mumwe nemumwe anokurudzira nguva yake. Jesu anenge aripo mukati menguva nomwe dzese. Saka mutumwa mumwe nemumwe kana nyeredzi aivepo kunongedzerera vanhu kuna Jesu, nekuti Jesu ega ndiye aikwanisa kukundisa maKristu munguva imwe neimwe yekereke.
Mutumwa ndiye chikwangwani chinonongedzera kwaunoenda. Kunoperera rwendo rwedu ndiko kuna Jesu, Shoko raMwari rakanyorwa.
Kuyanana kwako naJesu saIshe naMuponesi wako, uye kukura kwekutenda nekutevera kwako Shoko raMwari Bhaibheri rakanyorwa, zvinotaura ramangwana rako pamweya. Hazvibvi pakereke yaunoenda.
Hapana ruponeso rwesangano rekereke. Ruponeso inyaya yemunhu mumwe nemumwe naMwari. Vhesi iri haritauri pamusoro pevanhu vakadakara vanofara mukereke.
VAROMA 14:12 Naizvozvo mumwe nomumwe wedu uchazvidavirira kunaMwari.
Kereke yenyu inokwanisa kukubatsirai kana kukutadzisai asi haigoni kukuponesai. Iwe umene unodavira pachako kuna Mwari pamusoro pemararamiro ako uye zvaunotenda. Iye anobva akutonga kupfurikidza Shoko rake, kwete nezvakabatwa paitaura mumwe munhu.
Kushanda nesimba chaive chinhu chaitsanangura kereke yekutanga.
MABASA 17:10 Pakarepo hama dzikatuma Pauro naSirasi Berea vusiku. Ivo vakati vachisvikapo, vakapinda musinagoge ravaJudha.
11 Ava vakanga vachinzwisisa kukunda veTesaronika, vakagamuchira shoko nomwoyo wose, vachinzvera Magwaro zuva rimwe nerimwe, kana zvinhu izvozvo zviri izvo.
Vainzvera zvese zvavainzwa neShoko rakanyorwa. Hapana kutadza kwaikwanisa kupindira muvatendi vakadai. Havana munhu wavaivimba vaitsvaga zvese zvavainzwa muMagwaro.
ZVAKAZARURWA 2:2 Ndinoziva mabasa ako, nokutambudzika kwako, nokutsungirira kwako, vuye kuti haudi kuvonana navanhu vakaipa; wakavaidza ivo vanoti, tiri vaapostora, vasi ivo chaivo, ukavawana vari venhema;
Kereke yakatanga zvakanaka. Vakasimukira nekushingirira kwete nekuverenga zvavaive vaisa. Vaive vasingatyi kushanda nesimba uye matambudziko. Vaitambudzikira kuparidza Evangeri, uye vaitsungirira paisvika kutambudzwa nekuidzwa kwaidzikisira kushingirira kwavo. Kukandirwa kushumba kuti vafe rufu runorwadza, vakakatyamadza mapegani nekuimba kwavo nziyo dzekurumbidza Mwari pavaimirira magumo avo, kunyange dzimwe nguva kuimba kwavo kwaigurirwa panzira nemhere yavo yekutya nekurwadziwa yaipupura kuti vaive vanhu. Vaive vanhu vakaita sei vaive vawana chikonzero chakakodzera kufira kupfurikidza ndufu dzairwadza kudaro. Mapegani akaona kuti kuyanana kwavo nanamwari vavo venhema kwaive kusina zvakwaireva kana zvichienzaniswa. Saka vanhu vakaurairwa kutenda kwavo ava vakatendeutsira mapegani mazhinji kuna Kristu.
Izwi rekuti kutambudzika rinoita mufananidzo wekutsungirira mukati mekushungurudzika. Vakatambudzika zvakaomarara kuti vamise kuvodzwa kwedzidziso dzevapostora. Bhaibheri ndiro raive mukuru wavo. Asi kuvapoteredza paive nevanhu vaive vakazadzwa nemifungo yavo yakachenjera yaitsauka kubva muShoko rakanyorwa. Yaive nyaya yesarudzo pakati pezvakabatwa paitaura vanhu vakachenjera kana vakuru vakasimudzirwa, kana kusarudza kuramba vachitevera Shoko raMwari rakanyorwa.
Pakutanga maKristu aive achitsvaga chokwadi zvakazara. Vaitenda kune zvakataurwa nevapostora chete. Mashoko aya ndiwo akaita Testamente Itsva. Pakafa mapostora, maKristu ekutanga vaitenda kune zvakanyorwa muTestamente Itsva chete. Kana chero mutungamiri aitaura zvakasiyana nezvaive muTestamente Itsva, vaingomudaidza kuti murevi wenhema.
Kushungurudzwa kwakaita kuti vapararire, asi kwese kwavaiguma vaenda, vaidzidzisa zvaive zvanyorwa nevapostora, saka nekudaro Shoko raMwari rakapararira, vanhu vakaita hukama hwakakura naJesu zvakamuita musoro wekereke. Vaparidzi vekutanga vaifanira kungwarira kwazvo. Kana waitaura zvakarehwa nevapostora vaizotariwa mune zvakanaka. Kana waitaura chero chinhu chakasiyana, waive murevi wenhema. Paive pasina chaive pakati nepakati.
KumaKristu ekutanga Jesu ndiye aive rudo rwavo rukuru, Shoko rake ndiro raive Mukuru wavo. SeMwenga vaive vakazvininipisa zvakazara kuMurume wavo. Hakuna mumwe aikwanisa kuvaudza zvekuita. Vaive vachikoshesa kwazvo Shoko rimwe nerimwe raive rakanyorwa muBhaibheri. Nekuti Bhaibheri ndiro raive Jesu, muShoko.
VAEFESO 5:31 Naizvozvo munhu uchasiya baba vake namai vake, anamatire mukadzi wake; ivavo vaviri vachava nyama imwe.
32 Chakavanzika ichi, chikuru, asi ndinotaura zvaKristu nezvekereke.
33 Asi imivo, mumwe nomumwe ngaade mukadzi wake sezvaanozvida iye; nomukadzi ngaatye murume wake.
Kereke yekutanga yaive isina rudo rwekutevera chero munhu. Kana wapinda murudo naJesu, vamwe vanhu vose havana kurudziro yavanayo pakutenda kwako. Mavhesi eBhaibheri ega ndiwo anobatira munjere dzako.
ZVAKAZARURWA 2:3 Ukatsungirira nokuva nomoyo murefu nokuda kwezita rangu, ukasaneta.
Muvhesi radarika vakatsungirira kuti vachengetedze zvitendero zvevapostora zveTestamente Itsva. Apa vakufanirawo kutsungirira kuti vachengetedze Zita raJesu. MaJuda eTestamente Yekare havana kugona kutenda kuti Mwari wemasimba ose ikakwanisa kuva Munhu. Saka maJuda haana kutenda kuti Mwari Wemasimbaose akauya pasi panyika akagara muMunhu, akazviratidza muMunhu Jesu. Zvino dambudziko rakabva ranyuka. Mumashure mekufa kwevapostora, mukati mezera rimwechete kana maviri, maKristu echiHedeni akatangawo kutambudzika kutenda kuti Munhu Jesu ndiye aive Mwari Wemasimbaose. Zvaive nyore kuti njere dzemunhu dzimuone ari Mwanakomana waMwari. Zvishoma nezvishoma pfungwa yakatanga kusimba yekuti, kana Jesu aive Mwanakomana waMwari, saka kwaifanira kuva kuine mumwe munhu kuDenga, aive Mwari Baba. Pakutanga chaive chinhu chisinganzwisisiki, asi chakazarurira mukova kufungidziro dzevanhu pamusoro pekuti Mwari aive akaita sei. Zvishoma nezvishoma maKristu aya akatanga kubva pane zvakanyorwa muBhaibheri. Vakatanga kushandisa fungidziro dzaibva pahuchenjeri hwemaGiriki, vakazivisa shoko rekuti “tiriadhi” rakagadzirwa nemuchenjeri wechiGiriki ainzi Plato. Shoko iri raizoshanduka zvishoma nezvishoma kuita “Tiriniti”. Mazwi asiri muMagwaro akatanga kupindira zvishoma nezvishoma, zvaizoguma zvaita “HuMwari hweVanhu vatatu” (Kutaura kusimo muMagwaro) kwaisazotsanangurwa neZita raJesu.
Makanga mane mizambiringa miviri mukereke – muzambiringa wechokwadi waive wakabatirira paZita raJesu uye kutenda kuBhaibheri chete, uye muzambiringa wenhema.
BHUKU RENGUVA DZEMAKEREKE NGUVA YEKEREKE YEEFESO
“... Uye nekuda kweZita rangu makatambudzika”. Vatendi ava vaive vasingatambudzikiri Pauro, kana bato rezvechitendero. Vaive vasina kuzvipira kuzvirongwa nezviitiko zvavaivaka vakabatirira pahukoshi hwazvo. Vaishandira Mwari. Vaive varanda vake, kwete midziyo yebato.
Hakuna mumiririri webato anokwanisa kupa zvaanofunga iye zvine chokwadi. Vanogona chete kutaura zvavanotenderwa kutaura nebato ravanomiririra, kana zvavanenge vakatarisirwa kuti vataure.
Zvino muzambiringa wenhema wakatanga kukura waifara kutambira pfungwa kubva kunze kweBhaibheri, uye waive wakazvipira kukudza huMwari hwaive neVanhu vazhinji hwaive husingatsanangurwi neZita raJesu.
Hondo yaive yatanga. Mbeu mbiri dzaive dzadyarwa.
ZVAKAZARURWA 2:4 Asi handifari nechinhu icho kwauri, kuti wakasiya rudo rwako rwokutanga
Imwe nzvimbo mukufamba kwenguva muzambiringa wechokwadi wakatanga kukura zvisine hanya. Vakavarairwa zvakanyanya. Kungwarira kwavokwakadzikisirwa nebudiriro. Zvinhu zvaizova zvakanaka kwechinguvana. Kushungurudzwa kwaizoti mirei. Zvishoma nezvishoma vakatanga kuita hunhu hwekuti vaive vasisina basa nekutevera Magwaro nemazvo. Rudo rwavo rukuru neBhaibheri rwakatanga kudzikira. Kutendera chakaipa kwakatanga kupindira. Kumanikidza kwekutendera hunhu uye zvitendero zvezvakatipoteredza zvaizokura. Rudo rwavo rwekutanga rukuru kuBhaibheri rwaive rwakupera. Vaive vasisatsvagi kuti dzidziso ive yakanyorwa muBhaibheri.
Pfungwa imwechete yakakosha yaive ichitanga yaive yekukoshesa kuva nemunhu mumwechete semutungamiri wekereke, anotiudza kuti totenda mune zvipi, sezvo izvi zvichiita kuti hupenyu hwedu hureruke zvakanyanya. Hatichafanira kuzvifungira zvachose.
Zviri nyore kwazvo kutevera munhu anotungamirira kudarika kutevera hutungamiri hweMweya Mutsvene.
Asi mbeu duku dzekukanganisa dzakadyarwa munguva yekereke yekutanga dzaizokura kusvikira dzava kereke yepasi rese isingateveri Magwaro nemazvo "yechichechi-chechi". "Inodaidzwa kuti masangano", yaizobvisa chokwadi, kusvikira pakupedzisira kunenge kusisina anotenda kuti Bhaibheri harina parakakanganiswa. Sezvakaitika naEva kuEdeni, kunyange kana ruri ruGwaro rumwe rusina kutendwa, zvakakwana izvozvo kuparadza kereke. Edzai kutsvaga muKristu nhasi anotenda kuti izwi rimwe nerimwe riri muBhaibheri nderechokwadi. Munenge muchitozotsvagisisa.
Sainzi dzinoti tsananguro yeShanduko yevanhu vachibva mumhuka (TOE) [Theory of Evolution] ndeyechokwadi, saka mamiriyoni emaKristu anoona Chitsauko chekutanga cheBhuku raGenesisi sechisina zvachinoreva.
Mucharangarira here mufananidzo wemuHedeni mukuona kwaNebukardinezari? Dombo rakatema tsoka dzemufananidzo rikaputsanya zvigunwe (TOEs) zvemufananidzo. Edzai kutsvaga muKristu asina mafungiro evanhu aanowedzera kune zvinotaurwa neBhaibheri. Vashoma kwazvo. Sainzi dzinoti tsananguro (kana kuti fungidziro) dzeBig Bang ndedzechokwadi, saka kubva padziri hatidi Mwari kuti atisike. Nyika yezveSainzi iri kuedza kwazvo, kunyange ichikundikana, kubatanidza tsananguro dzemasimba mana enyika kudziita tsananguro dzezvinhu zvese (Theory Of Everything) zvavanodaidza kuti chigunwe TOE. (Saka chichatemwawo neDombo riri kuuya, rinova Kuuya Kwashe Jesu.) Saka veSainzi vanoti havadi Mwari, kana kukoshesa Bhaibheri zvakanyanya. Mamiriyoni asingaverengeki anowira kumuteyo wepfungwa iyi. Vaparidzi vemumakereke vanotaura kasingagumi kuti mavhesi akawanda muBhaibheri reKing James akakanganiswa kuturikirwa kubva pazvinyorwa zvekutanga. KumaKrustu anhasi Bhaibheri rakutorwa kuitwa “mafungiro” evanhu vakarinyora. MaKristu ane chokwadi chekuti Bhaibheri rakazara nekuzvirwisa pacharo. Mbeu yekukakavara yakadyarwa munguva yekereke yekutanga yakukohwa gohwo rakakura kwazvo.
ZVIREVO 30:5 Shoko rimwe nerimwe raMwari rakanatswa:
II TIMOTIO 3:16 Rugwaro rwose rwakafuridzirwa naMwari, runobatsira pakudzidzisa, nokuraira, nokururamisa, nokuranga kuri mukururama,
Shoko rimwe nerimwe rinofanira kutendwa nekutererwa. Mwari haatipi mvumo yekunonga nekusarudza Magwaro atinoda. Kana kuine chero vhesi reBhaibheri rinopokana nezvamunotenda, zvamunotenda zvinenge zvakaipa.
ZVAKAZARURWA 2:5 Naizvozvo rangarira pawakawa, utendevuke, ugoita mabasa ako okutanga; kana usingaiti saizvozvo, ndichavuya kwawuri, ndikabvisa chigadziko chako chomwenje panzvimbo yacho, kana usingatendevuki.
Vazhinji munguva yekereke yekutanga vakatanga kufuririka kubva kuvanhu vari pamusoro vakakosha, kuzadzisa zvaidiwa nevanhu vaivatungamirira mumaguta mavo. Nekuti vanhu vaiteerera vanhu vaivatungamirira pachinzvimbo chedzidziso dzevaapositora, Mwari akabva abvisa mapositora ese, kunze kwaJohane, negore 70 AD saka nekudaro tsika yekutevera hutungamiri hwevanhu yakawedzera. Kana tichida kutadza, Mwari anotipa kutadza. MaJuda akanga ambodawo munhu aizovatungamirira, mambo, Mwari achibva avapa mambo Sauro, akavaitira zvakaipa zvakawandisa nekuti mambo aive asiri muhurongwa hwaMwari hwakanaka pamusoro pemaJuda.
“Roma” inokwanisa kudaidzwawo ichinzi “Roam” zvinoreva kuti kutenderera. MaJuda paakatenda kuti havaizogona kutora nyika yechipikirwa, Mwari akavaita kuti vatenderere murenje kwemakore makumi mana.
NUMERI 14:33 Vana venyu vachadzungaira savafudzi murenje makore ana makumi mana, vachirohwa nokuda kwokupata kwenyu, kusvikira zvitunha zvenyu zvaparadzwa murenje.
MaKrustu anofuratira uye kutsauka kubva pamavhesi eBhaibheri akaoma kunzwisisa, vachitenderera pamweya sezvo vasingazivi zvakadzama zvinorehwa neMagwaro akawanda. Vanotanga kuona Magwaro aya seakakanganiswa, kana kuti seasina kukosha. Iyi ndiyo nzira yakareruka kubva pakutsvaga chokwadi, saka hatizotsvagi zvirevo zvakadzama.
Nei Jesu akanyora kaviri nemunwe wake muvhu paakavingwa nevazhinji pamusoro pemukadzi akatorwa muhupombwe? MaKristu mazhinji havana zvizhinji zvavanoziva kudavira mubvunzo uyu, neimwe mibvunzo yakafanana neuyu. Vaimubvunza maererano neMurairo akashandisa nzira imwechete iyi kuvapa chidzidzo chakadzama pazvose huMwari uye murairo nenyasha.
Nei Ruka akanyorwa dzinza reropa raJesu pakati paDavidi naJosefa, kana zvichienzaniswa naMateo? Rimwe idzinza raJosefa. Rimwe idzinza raMaria. Nei paifanira kuita marudzi maviri?
Nei akaita maBhuku eEvangeri maviri chete akataura pamusoro pedzinza raJesu.
Nei Ruka akaita mazera gumi nematatu akawanda kudarika mazera akataurwa naMateo pakati paDavidi naJosefa?
Makereke matanhatu kuna Zvakazarurwa ane mazita chaiwo emaguta. Asi zita rekereke yechitatu ine zita rinopedziswa muchiGiriki, Pergamo, pachinzvimbo chezita raro chairo Pegamamu. Nei? Mubvunzo uyu wakatanga kubvunzwa mugore ra1850. Muchiri kuziva zvishoma zvakadii pamusoro peBhaibheri sezvavaiziva nguva iyoyo? Ruzivo rweSainzi rwakakura zvakanyanya mumakore 40 akadarika. Ruzivo rweBhaibheri rwuchitevera rwuchinanaira sekamba. MaKristu achiri kungoziva zvishoma zveBhaibheri sezvaizivikanwa makore makumi mana akadarika. Pane chinhu chisina kumira zvakanaka.
Mateo naMarko vakataura pamusoro pemutumwa mumwechete pabwiro raJesu. Nei? Ruka naJohane vakataura vaive vaviri. MaBhuku mana eEvangeri ari kuedza kutiudza kutii pano?
Maria paakauya kubwiro, Johane akataura kuti Jesu akamuudza kuti asamubate.
JOHANE 20:16 Jesu akati kwaari: Maria! Iye akatendevuka, akati kwaari nechiHebheru: Rabhoni; ndokuti Mudzidzisi,
17 Jesu akati kwaari: Usandibata,
Asi Mateo akati vakadzi vanotenderwa kubata Jesu Tsoka dzake chete.
MATEO 28:5 Zvino mutumwa akapindura akati kuvakadzi, musatya imi nokuti ndinoziva kuti munotsvaka Jesu wakanga akaroverwa pamuchinjikwa.
9 Zvino vakati vachienda kundovudza vadzidzi vake, tarira Jesu wakasongana navo akati, Kwaziwai! Vakavuya vakabata tsoka dzake vakamunamata.
Bhaibheri rakazara zvakavanzika zvakaita saizvozvo izvo maKristu mazhinji haana mhinduro. Vaya vasingatendi vanoshandisa mavhesi iwaya kutaura kuti Bhaibheri rakazara kurwisana. Saka vasingatendi vanokunda maKristu panhaurirano idzi. Nei maKristu mazhinji asingagoni, kusanganisira vanotenda kuMharidzo, kudaira mibvunzo iyi? Mhinduro dziri nyore ndedzekuti vakagadzwa murima nevakuru vemakereke avo, vasingatoziviwo mhinduro dzacho.
Saka kubvira pakutanga, vatungamiriri vemakereke vakadarikira Mwari, vakatungamirira kereke munzira yaizonodzikatira chokwadi kusvikira chakanganikwa.
Tsika dzavaNikoraiti zvinobva pana “nikao” zvinoreva “kupamba” uye “laos” zvinoreva kuti “Raiti” (ndicho chaunga), mune mamwe mashoko sangano. Kupamba sangano kwakashanda zvakanakisisa muRoma. Kereke yeCatholic yaizokura kuva sangano repasi rese, rinotongwa naPope, anobata kereke semudzvanyiriri mukuru. Nhasi, Pope ndiye ega mudzvanyiriri ari munyika dzekuMadokero eEurope. Asi Roma iri muItaly. Torai izwi rekuti ITALY murironge muchibva nerumwe rutivi-- Munowana LAITY (raiti) kubva pazwi rekuti vaNikoraiti). Saka kupamba raiti (sangano) kwakabata basa rako guru muRoma, kuti kubereke kereke yeRoman Catholic.
ZVAKAZARURWA 2:7 Unenzeve, ngaanzwe zvinoreva Mweya kukereke; unokunda, ndichamutendera kuti adye muti wovupenyu, uri muParadhiso yaMwari.
Munokwanisa kuona mufananidzo wacho nekukasika kana mukazvitarisa. Mangotarisa kamwechete. Asi hamukwanisi kunzwa dzidziso pakarepo, nekuti nhau dzinoda nguva mashoko asati ataurwa ese. Saka Mweya wakaisa kukosha panzeve, kuti tigone kunzwa kuziviswa kwezvatinoda kuudzwa naMwari pamusoro penguva imwe neimwwe yekereke. Zvikamu makumi masere zvezvatinotarisana nazvo panyika zvinobva pamaziso edu, asi zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana zvinobva panzeve dzedu. Saka Mwari akapa Satani mukana wekushandisa maziso edu. Satani anotinyengera nekuchiva kwemeso edu, runako nekubwinya kwenyika, nemakereke ayo akakura anoyevedza nehupenyu hwehutefe-tefe. Uye kukwezva kwepfuma kunotiita kuti tiite makaro.
Mwari anofamba nenzira yekuzvideredza kupfurikidza kutikumbira kuti titerere Shoko rake rakanyorwa muBhaibheri. Zvino tinofanira kumirira nekutsungirira kusvikira Mwari asarudza kuzivisa zvakavanzika zveShoko rake. Chokwadi chinotora nguva. Mbeu dzinokura nenguva yadzo. Michero inoibva zvishoma nezvishoma.
Nhasi vemharidzo vanoparidza vanoedza nepavanogona napo kuisa zviitiko zvemberi munguva yakadarika. Asi zviitiko zvinozozivikanwa munguva yazvo yakakodzera. Zvatinogona kuita chete kuedza kuti tisanyengerwe nevaparidzi vasinehanya ava. Kumhanyira nguva yaMwari kutambisa nguva.
Mwari anotaura nemakereke ese, muhuzhinji hwawo. Nguva imwe neimwe inofanira kufanana nenguva yekereke yekutanga, sezvo Mwari asingashandisi mapurani akawanda. Nguva imwe neimwe ichatongwa kubva pakubva kwayo pakutenda kwekereke yekutanga. Nguva yekereke yedu Raodikia, ndiyo nguva yakakoshesesa. Mwari akatarisira kuti tidzoserwe zvakazara pakutenda kwekereke yekutanga, uye kuti tiite kunge ivo. Zvino nguva yekereke yedu inozotemerwa panzira nenguva yekutambudzika kukuru. Avo vasina kufanana pakutenda nevekereke yeTestamente Itsva, vachadzidza chidzidzo chakaomarara. Horokasiti yemaJuda munguva yeHondo yePasi rese yechipiri, apo vanhu mamiriyoni matanhatu vakauraiwa nemaNazi aive nehutsinye, kwaive kufanoratidzirwa kwenguva yeKutambudzika kukuru, sekuparadzwa kwakaipisisa kwakaitwa Jerusarema nemaRoma muna AD 70 pakauraiwa maJuda anodarika miriyoni.
Asi kuvanhu vakazvimiririra vanorwisa kukura nekutekeshera kwechitendero chemasangano, nekuramba kwacho chokwadi cheBhaibheri kuitira kuti chisimudzire munhu anotungamirira semusoro wekereke, mugove wenguva inouya muParadiso unokunda nekure kurambwa nekusatambirwa kwavanosangana nako panyika. Jesu Kristu ndiye Muti weHupenyu. Iye ega ndiye anopa hupenyu husingaperi. Ndiye Bhaibheri muMunhu. Saka kana muchida kugara maererano nezvinorehwa neBhaibheri panyika, munogona kuzviita chete kana Mweya waKristu uri mamuri. Zvino mugove wenyu weMweya Mutsvene unozokutorai wokuisai muParadhiso, sezvo muchave chikamu cheMweya Mutsvene mukuru, chikamu chaJesu Kristu. Kana mukamumiririra panyika, muchamira naye kuDenga. Hakungazovi nemagumo erwendo akanaka kudarika iwayo.
Asi nguva imwe neimwe yekereke inofanira kukunda kutadza kuri mairi.
Chakakanganiswa nenguva yekereke yekutanga ndechekuti vakatenda kuti vaisafanira kurarama neBhaibheeri zvakazara. Vakatanga kufunga kuti kuterera kuda nekufunga kwevanhu vanotungamirira, vanoti vari kubatira Mwari, ndiyo nzira inodiwa naMwari kuti timushandire nayo. Pfungwa yekuzvipira kukereke uye kuchengetedzeka kupfurikidza kuva nhengo yekereke uye kuenda kukereke ndipo payakazvarwa. Hapana pakati pezvinhu izvi chinoita sechakaipa mavari, asi zvavaiita kwaive kutora maziso evanhu kubva paBhaibheri kuitira kuti maKristu asadzokorore zvinotaura Magwaro pavanorwira hutungamiri hwekereke yavo. “Pasita ndiye musoro wekereke”, “mari dzezvegumi ndedzapasita” uye “pasita wenyu achakuyambutsai” zvese hazvisi muMagwaro asi tichiri kuzvitaura nhasi. Saka mapato asina kubva muBhaibheri akanga achitanga kuumbwa aizobvisa vanhu kuenda kure kure neBhaibheri. Pakutanga zvaiita sezvisina kuipa, saka pfungwa idzi dzakapindira mukereke, zviri pachena mumaziso mevanhu. Vanhu vaive vakavarairwa zvakanyanya kuti vatarise kuti izwi rekuti “pasita” (mufudzi” rakanyorwa kamwechete chete muTestamente Itsva, saka harina simba rinobva muMagwaro kuti ave musoro wekereke.
Zvitendero zvakafirwa nevaapostora, zvaive zvisisina aizvikoshesa zvachose.
Mapositora akati Jesu aive ndiye Musoro wekereke uye kuti kereke inofanira kutungamirirwa neboka revakuru kana vatariri. Vatariri vemweya vaive vasisiri panzvimbo dzavo kuti vatarise kuti pfungwa itsva idzi dzaive dzisina kunyorwa muBhaibheri. Kuzvipira kuMagwaro kwakaneteswa, vanhu vakatanga kuzvifadza nekubudirira mukuzviunganidzira pfuma, sezvavakaita pamutambo waBerishazari pavaifunga kuti vakachengetedzeka. Zvaive nyore kwazvo kuti kereke iite munhu mumwechete anoitungamirira, aizovaudza kuti votenda mune zvipi.
Pauro aigarotaura pamusoro perudo rwevanhu rwekutungamirirwa nevanhu pakutanga chaipo. Ndiko kuneta kwakaberekwa kuri muropa redu vanhu.
Boka revatendi, kana kereke, raisanganirana mumba maKroe rakanyunyuta kuna Pauro pamusoro pechiKrustu chemakwikwi chaiitwa nevamwe vatendi vaizvidaidza kuti kereke yekwaPauro, kereke yaAporo, kereke yaKefasi-- sekuti kereke ndeyemumwe munhu. Nhasi tichiri nekereke yaLuther, yaWesley, yaWilliam Branham, kereke yeMharidzo. Kereke yaTomu. Kereke yaDick nekereke yaHarry. Makereke akupihwa mazita kubva pamazita evafundisi kana mapasita avo. Kuipa uku kwararama kwemakore 2000. Ihosha yakaomarara, uye inopararira zviri nyore. Kubatirira pahutungamiri hwevanhu pazvinhu zvese ndiko kuwira pasi kwekereke.
I VAKORINTE 1:11 Nokuti ndakavudzwa pamusoro penyu, hama dzangu, navari vokwaKroe, kuti kunegakava pakati penyu.
13 Ko Pauro wakaroverwa pamuchinjikwa nokuda kwenyu here? Ko makabapatidzwa muzita raPauro here?
Pauro akagumbuswa kuti munhu aibapatidzwa muzita rake. Nhasi zviri kushanda zvakanyanya sezvo vamwe vanhu vachibapatidzwa muzita raWilliam Branham, kana kuti Ishe Branham Kristu. Saka kutadza kwekereke yekutanga kwakatanga nehutungamiriri hwemunhu mumwechete mukereke, uye kutadza ikoko hakuna kubvira kwabviswa zvakazara.
Kune njodzi huru pakukoshesesa zvinhu (sekuti munhu mumwechete anosimudzirwa kuti atungamirire kereke), uye kurasa vamwe zvakazara (zvinotaurwa neBhaibheri pamusoro peboka revakuru rinofambisa zvinhu mukereke).
Kukoshesa zvivakwa zvikuru zvemakereke zvinosanganirana ungano huru dzevanhu kuti vatungamirirwe nemunhu mumwechete. Zvakanaka, asi zvinobva zvatapa boka rese kuti rigare mukutadza. Asi tinorasa kuti kereke yekutanga yaisanganirana mudzimba, umo musina munhu mumwechete angatonge boka guru rese, nekuti imba imwechete haizogoni kutakura boka guru, nekuti imba imwechete haizogoni kuwanisa boka guru nzvimbo. Imomo vaizoverenga nekukurukura pamusoro peBhaibheri, vorarama hupenyu hwekutevera Magwaro, pasina kutonga kwevatungamiri vane shungu dzekuva vakuru.
Saka vatendi vechokwadi munguva yekereke yekutanga vaifanira kurwisa kutadza ikoko kwekusimudzira hutungamiri hwevanhu, kunovengwa naMwari. Nhasi tinofanirawo kurwisa kuipa ikoko, sezvavaifanira kuita. Asi dambudziko redu rakunyanya kurasisa. Hatifaniri kupikisa zvakaipa zvekereke yekutanga chete, izvo senyoka zvinokwanisa kusvova nepasi pemukana muduku muMagwaro aive asisatererwi, asi tinofanirwawo kurwisa kubva mune dzimwe nguva tanhatu dzemakereke umo mikana mikuru yemavhesi emuBhaibheri aisatererwa akatendera kuti nyoka huru dzipoye dzichipindira.
VAFIRIPI 2:12 Naizvozvo, vadikanwa vangu, sezvamakaterera nguva dzose, ndisati ndiripo, pedzisai kuponeswa kwenyu nokutya nokudedera
Kana makadekara uye musingadi chinhu mukereke menyu, muri kurasikirwa nechimwe chinhu. Chenjerai!
RUKA 21:34 Chenjerai kuti moyo yenyu irege kuremedzwa nokudyisa nokubatwa, nokufunganya pamusoro pezvinhu zvovupenyu hwuno, kuti zuva iro rirege kukuwirai seriva.
35 Nokuti richawira vose vagere panyika yose.
36 Asi rindai nenguva dzose, mukumbire, kuti mugone kupukunyuka pazvinhu izvo zvose zvinozoitwa, mugomira pamberi poMwanakomana womunhu.
Riva muteyo wakavanzwa. Kana Mwari akasazivisa kutadza kwatiri kunotidzimaidza kuti tisaone chokwadi cheBhaibheri, tinenge tiri munjodzi yakaipisisa.
Nekuteerera pfungwa dzevanhu kereke yakaburitsa pachena kuti haina kutendeka pakuvimba kwayo, ikasiya kutevera nzira dzayakafamba nadzo. Tinotadza nenzira imwechete nhasi. Guta reEfeso rakanyangarika kuva nhandare yezvikepe apo jecha rakabva murwizi rwaiyerera ruchipinda panhandare rakazadza nhandare, mahombekombe egungwa akabva kuguta. Saka, pakupedzisira, hutungamiri hwevanhu uye mifungo yavo yakazadza pfungwa dzevanhu munguva yekereke yekutanga pavaibva vachienda kure neBhaibheri rakanyorwa. Kutadza kukuru kwenguva yekereke yekutanga kwaive kwekuti mupuresibheterio aive achidaidzwa kuti muprista, uye akagadzwa semusoro wekereke yepanzvimbo. Zvino kuita uku kwakabva kwatsigirwa nabhishopu akanga aitwa musoro wekereke yepanzvimbo muguta rimwe nerimwe nenzvimbo dzakaripoteredza.
Saka nhandare yaive yateiwa kuitira kereke yaitevera yakapinda mukati menguva yekereke yechipiri.